CalClassics .... sano 3 4 bilood ka hor #193
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 14
Waan aqriyay kuna dheganaa "aqri aniga" ee Rikoooo's Connie. Ma aqaan sida aad u awood u leedahay inaad u duusho, oo sida muuqata, si fiican u samee. Waxaan u aaday CalClassics, laakiin dhamaanteed waa diyaaradaha 2004, 2000, iyo 98. Waxba ma duulayo laakiin fsx alaab, marka laga reebo dagaalka, markaa waxaan ahay nin aad u fiican nin Ubisoft. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka, in kastoo. Runtii waan ku mahadinayaa taageeradaada. (Electra waa ok)
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.166